Articles in Live-Style
Gym သွားဆော့တဲ့အခါ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်း (၁၀) မျိုး
လူတိုင်းအတွက် အလှအပရေးရာနဲ့ ကောက်ကြောင်းတွေ၊ Muscle တွေ၊ အဖုအထစ်တွေက အရေးပါသလို ကျန်းမာရေးလိုက်စားဖို့ကလည်း အဓိကကျပါတယ်။ ကျန်းမာရေးလိုက်စားတဲ့ သူတွေကလည်း အပြင်မှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အဆင်မပြေဖြစ်တဲ့အခါ Gym ရုံသွားလေ့ရှိပါတယ်။ Read full article
SPA သွားစရာမလိုဘဲ အိမ်နေရင်း ခြေထောက်လေးကို လှပကျော့ရှင်းနေအောင် ပြုလုပ်ကြမယ်
အလှအပရေးရာဆိုတာ ယောက်ျားလေးအများစုနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်နေပေမယ့် မိန်းကလေးတွေအတွက်ကတော့ အရေးကြီးတဲ့လုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Read full article
ရှားစောင်းလက်ပတ်ကို ဘယ်လိုနေရာတွေအတွက် အသုံးပြုရမလဲ?
ရှားစောင်းလက်ပတ်ဆိုတာက အရည်ရွှမ်းတဲ့ အပင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ရှားစောင်းလက်ပတ်က အမြဲစိမ်းနှစ်ရှည်ခံပြီး အာရေဗီယန်ကျွန်းဆွယ်မှ ဆင်းသက်လာတဲ့ မျိုးစိတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Read full article
အလှဖျက်တဲ့ ဝက်ခြံတွေကို ဘယ်လိုနှိမ်နင်းမလဲ?
ဝက်ခြံဟာ သင့်အရေပြားအခြေအနေနဲ့ သင့်အရေပြားပေါ်က အမွှေးအမျှင်အဆီတွေနှင့် အဆီဆဲလ်တွေပြတ်တောက်သွားတဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အဖုလေးတွေကို ဝက်ခြံလို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ Read full article
ခြင်ဖမ်းကိရိယာလေးကို အိမ်တွင်းသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့ အလွယ်တကူ ပြုလုပ်ကြမယ်
ခြင်တွေဟာ ဘယ်လိုရာသီဥတုမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ရေတွင်းရေအိုင်နဲ့ ခြင်ဥ ဥချလို့ရတဲ့ နေရာတွေ ရှိရုံနဲ့ ပေါက်ဖွားတတ်တဲ့ သတ္တဝါတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဒီလိုမျိုး ပေါက်ဖွားလွယ်ပြီး အခန့်မသင့်ရင် သွေးလွန်တုပ်ကွေးနဲ့ အခြားရောဂါတွေအထိ ဖြစ်ပွားစေနိုင်တဲ့ ခြင်တွေ Read full article
နွေရာသီမှာ ဘယ်လို Fashion အလန်းတွေနဲ့ ရှိုးထုတ်သင့်လဲ?
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရာသီဥတုအနေဖြင့် နွေရာသီ၊ မိုးရာသီ၊ ဆောင်းရာသီဆိုပြီး (၃) မျိုးရှိပါတယ်။ ရာသီဥတုပြောင်းလဲတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီး အဝတ်အစားတွေ၊ နေပုံထိုင်ပုံတွေနဲ့ အစားအသောက်တွေ လိုက်ပြောင်းလဲကြပါတယ်။ ဒါကလည်း ခေတ်ရေစီးကြောင်းနဲ့အညီ လိုက်စီးမျောတဲ့ သဘောတရားပါ Read full article
by Wai Yan Kyaw on 26 January, 2021
ကိုဗစ်ကာလက အပြင်လျှောက်သွားတတ်တဲ့ သူတွေအတွက် တကယ်ကို အထီးကျန် ဆန်လွန်းပါတယ်။ ရောဂါကူးမှာကြောက်ပြီး အိမ်တွင်းကြိတ်အောင်းနေတဲ့ သူတွေကလည်း ဒုနဲ့ ဒေးပါ။ Read full article
မန္တလေးမြို့မှာ ဇန်နဝါရီလအတွင်း ခေါ်ယူနေတဲ့ မန်နေဂျာ အလုပ်အကိုင် (၉) ခု
ဇန်နဝါရီလအတွင်း မန္တလေးမြို့တွင်းမှာ ခေါ်ယူနေတဲ့ မန်နေဂျာအလုပ်အကိုင် (၉)ခုကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ Read full article
by Min Thway Ko on 21 January, 2021
ကောင်မလေးနဲ့ First Date ကို ဘယ်လိုမျိုး အထာကျကျ ဖြတ်သန်းမလဲ
အခုလို Covid ကာလကြီးမှာ အိမ်တွင်းအောင်း နေရတာကို တော်တော်ကြီး ငြီးငွေ့ နေကြလောက်ပြီ လို့ထင်ပါတယ်။ အဲတော့ Covid ကြီးပြီးသွားရင် Crushနဲ့ Date ဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကောင်မလေးနဲ့ ချိန်းဖို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် First Date မှာ အထာကျကျ Date နိုင်ဖို့အတွက် နည်းလမ်းလေး Read full article
Covid ကာလကြီး ပြီးသွားရင် Gym သွားဆော့မယ့် သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ် Stay Home မှာ Workout လုပ်နေတဲ့ သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ် Workout မလုပ်ခင် ဒီအချက်လေးတွေ လုံးဝ မလုပ်မိအောင် သတိထားဖို့ လိုပါတယ်။ Read full article
by Win MM Htay on 19 January, 2021
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ရှည်လျားတဲ့ သမိုင်းကြောင်းစဉ်လာတွေနဲ့ ဖြစ်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်တွေ လွှမ်းခြုံနေတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အပြင် ခေတ်အဆက်ဆက် ဘုရင်များ တည်ဆောက် လှူဒါန်းထားတဲ့ ဘုရားကျောင်းကန်တွေ၊ ဗိသုကာလက်ရာတွေ Read full article